Izindaba - Iwaranti Yekhwalithi Yefenisha Yama-Amazon
Iwaranti Yekhwalithi Yefenisha yase-Amazons
Iminyaka engu-3 Yokumboza
Amasevisi Angemuva Kokuthengisa&Isiqinisekiso Sokubuya Kwemali
Sicela uqaphele: iwaranti ayibandakanyi umonakalo owenziwe ngamabomu, umswakama oqinile, noma umonakalo wamabomu.
* Ngaphezu kwalokho, siphinde siqinisekise ukuthi yonke imikhiqizo yethu izosebenza uma uyithola ngaphandle kwalapho kushiwo ngenye indlela. Ukwaneliseka kwakho kubalulekile kithi, ngakho-ke uma umkhiqizo wakho kuyi-DOA (I-Dead On Arrival), sazise, ​​futhi usibuyisele kithi zingakapheli izinsuku ezingu-30 kusukela ngosuku owuthenge ngalo. Sizokuthumelela okunye esikhundleni ngokushesha uma sithola into yakho ebuyisiwe (Izindleko ezihambisana nokubuyisela izinto azibuyiselwa. Sizokhokha izindleko ezitholwe ngokuthumela enye into).
* Iwaranti izoba yize uma imikhiqizo isetshenziswa kabi, iphathwa kabi, noma ilungiswa nganoma iyiphi indlela.
* Izimali zokubuyisela isitoko zingase zenzeke ezimeni zokubuyiselwa imali ngenxa yokushintsha kwengqondo. Okwabathengi bamazwe ngamazwe kuphela
* Imisebenzi yokungenisa, izintela, nezindleko azifakiwe enanini lento noma ezindlekweni zokuthumela. Lezi zindleko ziyisibopho somthengi. * Sicela uhlole ihhovisi lezwe lakini lezokuthutha ukuze uthole ukuthi lezi zindleko ezengeziwe zizoba yini ngaphambi kokubhida noma ukuthenga.
* Ukucubungula kanye Nokuphatha amashaji ezintweni ezibuyiswayo kungumsebenzi womthengi. Imbuyiselo izokhishwa ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi ikhasimende lizonikezwa isaziso se-imeyili. Ukubuyiselwa kwemali kusebenza kuphela ezindlekweni zento Umshwana Wokuzikhipha Emthwalweni
Uma ujabulile ngokuthenga kwakho, sicela wabelane ngolwazi lwakho nabanye abathengi futhi usishiyele impendulo eyakhayo. Uma ungenelisekile ngokuthenga kwakho nganoma iyiphi indlela, sicela ukhulume nathi kuqala!
Siyajabula ukukusiza ukuxazulula noma iyiphi inkinga futhi uma isimo sikudinga, sizokunikeza imbuyiselo noma ukushintshwa.
Sizama ukusiza amakhasimende ethu ukuthi alungise noma iyiphi inkinga ngaphakathi kwemikhawulo efanelekile.
Ngokuya ngesimo, sisengakwazi ukufaka izicelo zewaranti
Isikhathi sokuthumela: Sep-15-2020